I-ZigBee 3.0: Isisekelo se-Intanethi Yezinto: Kuthulwe futhi Kwavulelwa Izitifiketi | Ubuchwepheshe be-Owon
I-ZigBee 3.0: Isisekelo se-Intanethi Yezinto: Kuthulwe futhi Kwavulelwa Izitifiketi
(Inothi Lomhleli: Le ndatshana, ihunyushwe ukusuka kuZigBee Resource Guide · 2016-2017 Edition.)
I-Zigbee 3.0 ingukuhlanganiswa kwamazinga angenantambo ahola phambili e-Alliance abe yisixazululo esisodwa sazo zonke izimakethe ezima mpo nezinto ezisetshenziswayo. Isixazululo sihlinzeka ngokusebenzisana okungenamthungo phakathi kobubanzi obubanzi kakhulu bamadivayisi ahlakaniphile futhi sinikeza abathengi namabhizinisi ukufinyelela kwimikhiqizo namasevisi amasha asebenza ndawonye ukukhulisa impilo yansuku zonke.
Isixazululo seZigBee 3.0 senzelwe ukuthi kube lula ukusisebenzisa, ukuthenga nokusebenzisa. Uhlelo lwemvelo olulodwa olusebenzisana ngokuphelele luhlanganisa zonke izimakethe eziqonde mpo ekususeni isidingo sokukhetha phakathi kwamaphrofayili athile wohlelo olufana ne: Home Automation, Light Link, Building, Retail, Smart Energy kanye neMpilo. Onke amadivayisi we-PRO wefa kanye namaqoqo azosetshenziswa kusixazululo se-3.0. Ukuhambisana kwaphambili nangasemuva ngamaphrofayli wefa we-PRO kugcinwa.
I-Zigbee 3.0 isebenzisa ukucaciswa kwe-IEEE 802.15.4 2011 MAC / Phy esebenza ku-2.4 GHz band engenamalayisense eletha ukufinyelela ezimakethe zomhlaba wonke ngezinga lomsakazo we-sigle nokusekelwa okuvela kubanikezeli abaningi beplatifomu. Eyakhelwe ku-PRO 2015, ukubuyekezwa kwamashumi amabili nanye embonini ehola iZigBee PRO mesh networking standard, iZigBee 3.0 isebenzisa impumelelo yemakethe engaphezu kweminyaka eyishumi yalolu ungqimba lokuxhumana olusekele amadivayisi angaphezu kwezigidi eziyinkulungwane athengisiwe. I-Zigbee 3.0 iletha izindlela ezintsha zokuphepha kwenethiwekhi ukumaketha ukuhambisana nezidingo ezishintsha njalo zomhlaba wokuphepha we-IoT. Amanethiwekhi weZigbee 3.0 abuye anikeze ukusekelwa kweZigbee Greeen Power, amandla wokuvuna amandla "angabi namabhethri amaningi" ngokunikeza umsebenzi wokumela ofanayo.
I-Zigbee Alliance ibilokhu ikholelwa ukuthi ukusebenzisana kweqiniso kuvela ekumisweni kuwo wonke amazinga wenethiwekhi, ikakhulukazi izinga lesicelo elithinta kakhulu umsebenzisi. Noma yini kusukela ekujoyineni inethiwekhi kuya ekusebenzeni kwamadivayisi njengokuvula nokucisha kuyachazwa ngakho-ke amadivayisi avela kubathengisi abehlukene angasebenza ndawonye ngokushelela nangokuzikhandla. I-Zigbee 3.0 ichaza amadivayisi angaphezu kwe-130 ngobubanzi obubanzi bezinhlobo zamadivayisi kufaka phakathi amadivayisi we: i-automation yasekhaya, ukukhanyisa, ukuphathwa kwamandla, i-smart appliance, ukuphepha, inzwa, nemikhiqizo yokuqapha ukunakekelwa kwempilo. Ixhasa ukufakwa okulula ukusetshenziswa kwe-DIY kanye nezinhlelo ezifakwe ngobungcweti.
Ungathanda ukufinyelela kuZigbee 3.0 Solution? Iyatholakala kumalungu e-Zigbee Alliance, ngakho-ke joyina i-Alliance namuhla bese uba yingxenye yohlelo lwethu lokuphila emhlabeni jikelele.
NguMark Walters, i-CP Yezokuthuthukiswa Kwamasu · iZigBee Alliance